TOROMARIKA MIKASIKA NY HANATONTOSANA NY FANADINANA FIHODINANA FAHAROA - Police Nationale Malagasy
400866 ème page consultée et vous êtes 267870 ème visiteur.
TOROMARIKA MIKASIKA NY HANATONTOSANA NY FANADINANA FIHODINANA FAHAROA AMIN’NY FIFANINANA HANDRAISANA MPIANATRA HO POLISY MIISA 1250 TAONA 2020-2021
Taorian’ny “POINT DE PRESSE” izay natao ny 05/05/21 nanomboka tamin’ny 11ora tao amin’ny SALLE OPS n’ny Polisim-pirenena Anosy Antananarivo, dia toy izao manaraka izao ny andinindininy tsara ho fantatra ho fanomanana ny dingana faharoa amin’ny fanadinana:
1- Ny toromarika voalaza manaraka etoana dia mety hisy fanovana hatrany arakaraky ny fivoaran’ny hamehana ara-pahasalamana apetraky ny fitondram-panjakana eto Madagasikara.
2- Ho an’ireo mpiadina afaka tamin’ny fanadinana fihodinana voalohany amin’ny fifaninanana handraisana mpianatra ho polisy miisa 1250, taona 2020-2021, ihany no afaka hiatrika ny fanadinana fihodinana faharoa.
3- Ny valim-panadinana dia atao peta-drindrina isaky ny sampandraharahan’ny Polisim-Pirenena manerana ny Nosy sy amin’ny “site web de la Police Nationale” : https://www.pn.gov.mg
4- Ho tanterahana manomboka ny 31 may 2021 izany fihodinana faharoa izany.
5- Ho fampatsiahivana dia mizara telo ny taranja hanadinana :
– Taranja “Entretien et Examen Oral” ho an’ny sokajy rehetra ;
– Taranja “Education Physique et Sportive” ho an’ny sokajy rehetra ;
– Taranja “Test Psychotechnique” ho an’ny sokajy “Elèves Commissaires de Police, Elèves Officiers de Police ary ny Elèves Inspecteurs de Police”.
6- Ny “Visite médicale (CM2)” dia ho tanterahan’ny mpiadina araky ny toromarika izay ho ampitaina amin’ny fotoana manaraka. Toy izany koa ny fanatanterahana ny “contre-toise” sy ny “Enquête de moralité”.
7- Ny toerana hanatanterahana ny fanadinana fihodinana faharoa dia toy izao manaraka izao :
– Ho an’ny sokajy “Elèves Commissaires de Police, Elèves Officiers de Police ary ny Elèves Inspecteurs de Police dia ao amin’ny “Direction Générale de la Police Nationale” Anosy Antananarivo;
– Ho an’ny sokajy “Elèves Agents de Police” kosa dia mitsinjara toy izao :
– Ny mpiadina afaka tamin’ny fihodinana voalohany tao amin’ny Foibem-panadinana Antananarivo sy Antsirabe dia ao amin’ny “Direction Générale de la Police Nationale” Anosy Antananarivo ;
– Ny mpiadina afaka tamin’ny fihodinana voalohany tao amin’ny Foibem-panadinana Antsiranana sy Sambava dia ao amin’ny “Direction Régionale de la Sécurité Publique” Antsiranana (Faritra Diana);
– Ny mpiadina afaka tamin’ny fihodinana voalohany tao amin’ny Foibem-panadinana Toamasina sy Ambatondrazaka dia ao amin’ny “Direction Régionale de la Sécurité Publique” Toamasina (Faritra Atsinanana);
– Ny mpiadina afaka tamin’ny fihodinana voalohany tao amin’ny Foibem-panadinana Mahajanga sy Antsohihy dia ao amin’ny “Direction Régionale de la Sécurité Publique” Mahajanga (Faritra Boeny);
– Ny mpiadina afaka tamin’ny fihodinana voalohany tao amin’ny Foibem-panadinana Fianarantsoa sy Ambositra ary Manakara dia ao amin’ny “Direction Régionale de la Sécurité Publique” Fianarantsoa (Faritra Haute Matsiatra);
– Ny mpiadina afaka tamin’ny fihodinana voalohany tao amin’ny Foibem-panadinana Toliara sy Morondava ary Tolagnaro dia ao amin’ny “Direction Régionale de la Sécurité Publique” Toliara (Faritra Atsimo Andrefana);
8- Ny mpiadina hamonjy ny toeram-panadinana misy azy avy dia mitondra ny karam-panondrony sy ny “Extrait du résultat” izay misy ny anarany ka atao “certification” amin’ny sampandraharahan’ny
Polisim-Pirenena akaiky azy, entina hanamorana ny “Voyage” izay ho ataony.
9- Ny fikarakarana rehetra ankoatra ny voalaza teo dia ho ampitaina amin’ny fotoana mahamety izany.
10- Raha mila fanampim-panazavana dia afaka miantso ny laharana finday 034 05 559 55 sy amin’ny “whatsApp” laharana 034 08 643 11 amin’ny “Chef de Service Central du Recrutement”.